Xawaadaha Soomalida ee Maraykanka oo walaacsan - BBC News Somali
Xawaadaha Soomalida ee Maraykanka oo walaacsan
Banki Maraykan ah oo gacanta ku haya ilaa 80% lacagaha laga soo xawilo Maraykanka ee loo diro Somaaliyaa ayaa adeeggaas joojinaya maanta, oo bisha Febraayo tahay 6, sababo la xiriira welwel laga qabo in lacagahaas ay gacanta u galaan kooxda Al Shabaab.
Soomaalida Maraykanka jooga ayaa sannadkii in ka badan 200 oo milyan oo doollar u dira Somalia.
Mudane ka tirsan Congresska Maraykanka ayaa ku tilmaamay go'aankaas mid naxdin leh, hase yeeshee Bankiga Merchants Bank wuxuu sheegay in xeerarka cusub ee loogu tala gala galay lacagaha sida aan xalaasha ahayn lagu kasbado ay khasab kaga dhigeen inay adeegga joojiyaan.
Milkiilayaasha Xawilaadaha ayaa dadaal ugu jira in ay si jiraan oo ay si shaqeeyaan kadib markii bagiga lacagaha u xawilada dibada uu ku wargaliyay xawilaadaha in uu xisaabaadkooda xiri doono.
Haddaba gannacsada xawaaladaha ayaa kulan kula yeeshay Miniapolis bulshada soomalida.
Shirkaasi kadib ayaa wariyahay BBC-da Mohamed Haaji Hussein waxa uu waraystay Abdiaziis Sugule gudoomiyaha ururka ay xawilaaduhu ku bahoobeen ee SAMSA iyo Xoghayaha ururkaasi Abdirizaaq Anshuur wuxuuna marka hore Abdirizaq weydiiyey ilaa hadda wixii u qabsoomay. Halkan ka dhagayso.